कोरोना महामारीले हामीलाई असमान संरचना भत्काउने अवसर दिएको छः सदस्य राणा « Dainiki
१५ भाद्र २०७७, सोमबार १२:०७
कोरोना महामारीले हामीलाई असमान संरचना भत्काउने अवसर दिएको छः सदस्य राणा
महामारी अप्रत्यशित रुपमा आएको र विश्वले नै पूर्व तयारी नगरेको क्रममा हाम्रो राष्ट्रमा पनि पूर्व तयारी भएको भन्न सकिने अवस्था छैन । यस सँगै महिलामा कस्ता प्रभाव पा¥यो भनेर ध्यान पुगेको छैन । अहिले कसरी हुन्छ संक्रमण बढ्न नदिने भन्ने कुरामा बढि केन्दित भएको छ । बन्दाबन्दी निषेधाज्ञाको कुरा आयो तर त्यसले महिलाहरुलाई कस्तो प्रभाव पर्यो वा परेको छ भन्ने कुरा केही सांकेतिक तथ्याङ्क आएका छन् । आत्महत्याका कुरा, यौन हिंसाका कुरा, महिलामाथि हुने हिंसाका कुरा । यो अवस्थामा पुर्नस्थापना केन्द्र कसरी सञ्चालन भयो भन्ने कुराको सांकेतिक अध्ययन भएका छन । तर सांकेतिक अध्ययन भन्दा पनि विश्वकै आंकडा हेर्यौँ भनेपनि एकदमै विकसित राष्ट्रहरु फ्रान्स, जर्मनी, युके, युएसए, क्यानडा अष्ट्रेलियामा पनि लक डाउनको अवधिमा ३० देखि ४० प्रतिशत महिला हिंसामा परेको घटना विवरण आइसकेको छ ।
त्यही अनुमान ग¥यौँ भनेपनि हामीकहाँ कति भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । एकदमै तल्लो वर्गमा रहने, सिमान्तकृत, दुर्गम क्षेत्रमा, कम पुर्वाधार भएका क्षेत्रमा महिलामाथि हिंसा झन बढेको अवस्था र गरिबीमा रहेका महिलामा झन बढ्ने कुराले पनि पुष्टि हुन्छ । आंकडा नै चाहिदैन पुष्टि हुन्छ की महिलामाथि हिंसा बढेको छ भनेर । म आफै पनि यो क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले पनि भन्न सक्छु हिंसा बढेको छ भनेर । यो महामारीको अगाडी पनि जति हिंसा हुन्थ्यो त्यसमा ४० प्रतिशत हिंसा आफ्नै घरभित्र हुने गर्दथ्यो । आफ्नै पार्टनरले, आफ्नै श्रीमानले घरेलु हिंसा गर्ने गरेको छ ।
बन्दाबन्दीको अवस्थामा त्यो ४० प्रतिशत त पीडतकसँग थुनिएर बसेको अवस्था छ । बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन । कति सेवा प्रदायकहरु, सेवा दिन सक्ने संस्थाहरु पनि सेवा दिनसक्ने अवस्थामा थिएनन् । यस्तो अवस्थामा कस्तो सेवा दिनुपर्छ भन्दापनि केही कसैले पीडितले सेवा माग्नलाई फोन गरिहाल्यो भनेपछि पनि अहिले लक डाउन छ खुलेपछि हेरौँला भन्ने किसिमको जवाफ प्रहरी प्रसाशन देखि अरु सेवा प्रदायकहरुबाट भएका अवस्था छ । हामी आफै अनुमान गर्न सक्छौँ जुन बेला ४० प्रतिशत सामान्य बेलामा पनि पीडित भएका महिलाहरु पनि अहिले बन्दाबन्दीको अवस्थामा पीडकसँग थुनिएर र कतिपय अवस्थामा एउटै कोठामा खचाखच गरेर बस्ने पनि अवस्था छ । फोन लिएर कुरा गरौँ भनेर पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन । फोन पनि पीडकको नियन्त्रणमा हुन सक्छ । कहिले काँही आफ्नो साथीसँग सेयर गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसले पनि महिलामाथि कति हिंसा भयो भन्ने कुरा देखाउँछ ।
अर्को पाटोमा पनि हेरौं न, आर्थिक रुपमा महिलालाई कस्तो प्रभाव पार्यो ?
अर्को हेर्नै पर्ने भनेको अनपेड केयर वर्क हो । महिलाहरुले विश्वको आंकडामा पुरुषभन्दा तीन गुणा बढी अनपेड केयर वर्क गर्छन । बच्चालाई हेर्ने पढाउने, वृद्ध मान्छेहरुको हेरचाह गर्ने त्यो काम महिलाले गरिरहेको छन् । महामारीको बेलामा केही गरी कोरोना लागेर निको भएर मान्छे आयो भने पनि त्यही महिलाले हेर्नुप¥यो । घरको बच्चाहरु सबै, स्कुल बन्द पछि महिलाले हुर्नुप¥यो । कतिपय अवस्थामा पितृसत्तात्मक सोचले गर्दा पुरुषले घरको काममा सहयोग गर्दैनन । बरु घरमा बसेपछि धेरै डिमाण्ड गर्छन । बाहिर हुँदा बरु त्यती हुँदैन । घर बसेपछि कि मिठो पकाउनुप¥यो कि अरु नै सेवा गर्नुप¥यो ।
मैले करिब ७० वटा राष्ट्रको समिक्षा हेर्दा नेपालले भोगेका व्यवधानहरुको बावजुद पनि गरेको प्रगति छोटो समयमा तुलनात्मक रुपमा राम्रो गरेको मान्नुपर्छ । तर कानून मात्रै भएर भएन तर कार्यान्वयन हुनुप¥यो नी । जसको लागि बनाइएको कानून हो उनीहरुको त्यसको बारेमा लाभान्वित हुनुप¥यो नी । घरेलु हिंसाको कानून छ भनेर मात्रै भएन नी । कतिपय ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरुलाई कानून छ भनेरपनि थाहा छ । तर पनि हिंसा सहितका सम्बन्धमा बाँचिरहेका छन । कहाँ गएर रिपोर्ट गर्ने, कसरी रिपोर्ट गर्ने भन्ने पनि थाहा छ तर हाम्रो कानूनी प्रकृया लामो र महंगो पर्न जान्छ र त्यसमा विश्वास छैन । लामो प्रकृया भएर पनि राहत पाउँछु भन्ने विश्वास नै छैन । कतिपय निम्न वर्गका व्यक्तिलाई घरैमा त केही छैन भने मैले घरेलु हिंसाको मुद्धा हालेर पाउने के छुर ? बरु पाउने के छु भने हरेक समाजले मलाई छिछि र दुरदुर गर्ने छ । मेरो पहिचान पनि गुमाउने छु भन्ने छ भने कानून मात्रै भएर त भएनी नी,
त्यसको जरा के हो भन्ने पनि हुनुप¥यो ? कार्यान्वयन के हो हुनुप¥यो । तर कतिपय अवस्थामा राम्रोसँग कागजमा त लेखेको छ । तर जसले सेवा दिनुपर्ने हो उहाँहरुको त्यो किसिममको संवेदनशिलता छैन । क्षमता छैन ज्ञान छैन । र अनुगमन पनि छैन हाम्रो । कानून बनाएको छ अनुगमन प्रकृया त नियमित रुपमा हुनुप¥यो । अनि बल्ल संकटको बेला महिलाले उचित सेवा सुविधा पाउछन् ।
अर्को हिंसा कस्तो किसिमको भएको छ । हिसा भएकाहरुलाई सेवामा पहुँच कस्तो छ, त्यसपछि हेल्पलाइन र परामर्शका कुराहरुलाई अत्यावश्यक सेवा अन्तरगत राख्नुपर्ने अवस्था छ । तेस्रो स्वास्थ्य, स्वास्थ सेवाको फ्रन्ट लाइनमा ७० प्रतिशत महिलाहरु काम गररहेका छन् । पीपीइ चाहिन्छ । डाक्टरले काम गरेका छन । तर हामीले नर्सको काम गर्ने, मिड वाइफको काम गर्ने, क्लिनिङको काम गर्ने महिलाहरु उनीलाई सुरक्षा त चाहियो नी ।
अर्को स्वास्थ्यमा पहुँचको कुरा हामी यहाँ ठूल्ठूलो विरामीको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ । गर्भवति महिला सुत्केरी महिला र प्रजनन स्वास्थ्यको कुराहरुलाई अहिले धेरै जसो राष्ट्रको ध्यान कोभिडलाई रोक्नतर्फ डाइभर्ट भएकाले अस्पतालका सेवाहरु पनि कोभिडका लागि भनेर अस्पतालहरु परिणत भएका छन । अरु सेवाहरुलाई अन्त्यन्तै न्यूनतम ध्यान दिएको छ । त्यसको पनि प्रभावह हुनुपर्ने छ । त्यो प्रकारको स्वास्थ्य पहुँच कसरी बनाउने भन्ने कुरा छ ।
कतिपय अवस्थामा पहिलेदेखि असमान संरचनामा बाँचिरहेका र निम्न गरिबी भन्दा पनि तल्लो वर्गमा बाँचेका महिला र पुरुषहरुमा पनि यसको प्रभाव छ त्यता पनि ध्यान दिनुपर्ने अवश्यकता छ । विशेष गरी अपांगता भएका महिलाहरु, एचआइभी भएका महिलाहरु, यौनिक अल्पसंख्याक महिलाहरु यसबाट झन पीडित हुने सम्भावनाहरु छन । यो सबै कुरा समेटेर सिडले गाइडेन्स नोट निकालेको छ ।
गर्ने धेरै काम छ । सरसरती भन्दा नि सबैको ध्यान संक्रमण रोक्ने भन्ने छ असिस्मेन्ट भएको छैन । त्यो तुरुन्तै गर्न सकिन्छ । यति धेरै सरकारी निकाय छन । यो कुरा तुरुन्तै गर्न सक्ने हो तर कुन निकायले गर्ने मलाई थाहा भएन तर तुरुन्तै असिस्मेन्ट गर्नुप¥यो । कस्ता महिलालाई के प्रभाव परेको छ । कुन वर्गका महिलालाई कस्तो प्रभाव परेको छ । त्यसपछि रिस्पोन्सको प्रोगाम तर्जुमा गर्नुप¥यो । नागरिक समाज देखि लिएर सरकारी निकायले समन्वय गर्नुप¥यो । महिलालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुप¥यो ।
त्यसपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरु जसको आयआर्जन गुमाएका छ । उनीहरुको घरमै निकै ठूलो प्रभाव परेको छ । बालबालिलाई प्रभाव परेको छ सबैलाई परेको छ । भने त्यस्तोलाई पहिलापहिचान गरेर कस्तो प्रकारको सेवा दिन सकिन्छ । सामाजिक प्याकेज अन्तरगत त्यस्तो गर्नुप¥यो । तर सरकारले गर्न काम गर्न सकेन । गरेको पनि पर्याप्त छैन ।
सामाजिक, आर्थिक संरचना र महिलालाई पर्ने प्रभाव नै ठूलो कुरा हो । कस्तो देखिएको छ भने महामारीहरुले पहिलेदेखि विद्यमान असमानतालाई झन बढाउँछ । इबोला लगायतका संक्रमणबाट त्यो पहिले नै पुष्टि भइसकेको छ । ंअहिले भनेको कस्तो हुन्छ भने हामीले समयमै सामाजिक र आर्थिक प्रभाव हेर्दा कस्तो प्रभाव छ र यसलाई हामीले पहिले जस्तो जस्तो पोलिसि छ त्यही अनुसारले जाने हो भने यो खाडल झन बढ्छ ।
घरभित्रको काम बाँडेर गर्नुप¥यो । पकाउने देखि बच्चा हेर्ने काम सेयर गर्नुपर्छ । सुरक्षीत घर कसरी बनाउने भन्ने ठूलो कुरा हो । बालबालिका र महिलालाइ पनि सूचना दिनुप¥यो । कहाँ सूचना दिने कसरी दिने भन्ने । सरकारी संयन्त्र पनि प्रभावकारी हुनुप¥यो । सूचना दिन लिन तत्परता हुनुप¥यो ।
यसमा नागरिक समाजको भूमिका धेरे महत्वपूर्ण छ । तर एक्लै भन्दिन समन्वयमै काम गर्नुपर्छ । एक्लै गरेको काम दिगो हुँदैन । कतिपय स्थानमा निःशुल्क काउन्सिलिङ गरेको थियो । सेल्टरहरुमा पनि ७० प्रतिशत खुला थियो । त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीको पनि सुरक्षाको कुरा थियो । त्यो प्रकारको सेवा नागरिक समाजले गरिरहेको थियो । अहिलेको महामारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले पूर्वाधार दिनुप¥यो । क्षमता अभिवृद्धि गराउनुप¥यो अत्यावश्यक सेवाको रुपमा राख्नुप¥यो जनचेतना गर्ने काम पनि गर्नुप¥यो वकालत गर्न पनि जरुरी छ । अब भने असेसमेन्ट, रिस्पोन्स प्रोगाम कसरी अगाडी बढाउने भन्ने कुरामा सरकारी निकाय र नागरिक समाज अगाडी बढ्नुपर्छ ।